Ụlọ ọrụ mabul ojii - Ndị na-emepụta mabụl ojii nke China, ndị na-ebubata ya
Italian ọla edo nero portoro oji mabul nwere veins ọla edo
Portoro Marble, nke a na-akpọkarị mabul ojii na ọla edo, bụ ụdị marble Italian mara mma.Ọdịdị ya na-adịghị ahụkebe na-eme ka ọ bụrụ otu nkume mabul na-enweghị atụ dị ka nkume eji achọ mma.
Ime ime ụlọ ịsa ahụ ihe ndozi ojii rose mabul nwere veins ọcha
Marble na-abụkarị nhọrọ dị egwu maka imewe ụlọ ịsa ahụ ebe ọ bụ nke kpochapụwo ma mara mma.Ọ bụ kpochapụwo, na-agbakwunye uru n'ụlọ gị, ma ọ mara mma n'ezie.Maka echiche ojii zuru oke, taịlị ụlọ ịsa ahụ nwere mmetụta ojii rose marble dị mma.Marble ga-ama mma n'ime ime ụlọ ịwụ ọ bụla, ma ọ bụ omenala ma ọ bụ nke ọgbara ọhụrụ, nke siri ike ma ọ bụ mara mma.Ị ga-ahọrọ taịlị marble nwere nchara nchara ma ọ bụrụ na ị nwere ụda eke ma ọ bụ laminate osisi.Mabụl na-egbuke egbuke ga-adị mma n'elu ebe a na-arụ ọrụ, tub gbara ya gburugburu, na mgbidi ịsa ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ihe nchara chrome ma ọ bụ brọsh.
okomoko ime ụlọ ịwụ echiche ịsa mgbidi ogwe ojii mabụl na ọla edo veins
Marble bụ ihe mara mma na ihe a nụchara anụcha n'ozuzu ya, na agba dị ka nwa na-eme ka àgwà ndị a dịkwuo mma.Veins ndị ahụ eke na ndị pụrụ iche na-apụta ìhè megide ndabere gbara ọchịchịrị, elu mabul na-aghọkwa ihe ịchọ mma dị mkpa n'ihi ncha a.
Ụlọ ịsa ahụ bụ otu n'ime ebe pụtara ìhè ịmalite.Mgbidi marble ojii, dịka ọmụmaatụ, nwere ike imeziwanye nhazi na ọnọdụ izugbe n'ụzọ dịgasị iche iche.Mee ebe mgbaba n'otu n'ime mgbidi ụlọ ịsa ahụ.Lee ka o si mara mma nke ụkpụrụ okike na marble n'ọnọdụ a.Ọ dị ka foto nkịtị nke enweghị ike iṅomi ma ọ bụ megharịa ya.
N'ogbe marquina Tunisia nero st laurent sahara noir ojii na mabụ ọla edo
Nke a eke nkume sahara noir black marble ji a miri oji ndabere, organically enriched site gold na-acha ọcha veining, bụ ruru eru ma nke oge a na omenala ojiji, na dị ukwuu n'ihi na ime imewe components.Enwere ike iji Nero Saint Laurent mabụl mee ala, ihu ihu, ebe a na-esi nri kichin, ihe ịchọ mma na imewe, ụlọ ịsa ahụ, kọlụm, ebe ọkụ, windo windo, na ihe ịchọ mma nke ụdị ọ bụla.
Ngwongwo anụ ụlọ ojii ojii mystic maka tebụl n'elu
Mystic osimiri marble bụ ụdị marble ojii nke a na-agbawa na Mianmaa.Agba bụ okirikiri ojii nwere veins ọla edo.
Osisi ochie ọla ọcha aja aja ife ojii zebra marble tiles maka ụlọ nzukọ
Obere osisi marble osisi ochie, slabs marble osisi ojii sitere na China Oji miri emi, mabụ mmiri na-efe efe nwere ebili mmiri na-acha ọcha, isi awọ na agba aja aja na ebe nchekwa oge ụfọdụ nke quartz akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ihe nrịbama granite na-acha anụnụ anụnụ, Gray Granite, Black Granite, Taịlị mgbidi Marble ọcha, Granite odo odo, Gray Gray dị ọkụ,